MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward You searched for roaming - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ထောဘီ ၇ဆ Pack
Search Results for: roaming
International Roaming FAQs mm
International Roaming1.ပြည်ပခရီးထွက်ပါက ယခု မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေသောဖုန်းကို ယူဆောင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?ပြည်ပခရီးထွက်ပါက ယခု မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေသောဖုန်းကို ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။ GSM နှင့် WCDMA ကြိုတင်ငွေဖြည့်သုံးစွဲသူများမှာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။ ဝန်ဆောင်မှုအား လျှောက်ထားရန် မလိုအပ်ပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်ရှိစဉ် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုပါက မိမိနိုင်ငံတွင်း ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများနှင့် မတူညီပါ။ 2. ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခြင်းအတွက် နှုန်းထားတွေ ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားပါသလဲ။ MPT ကဒ်တွေကို ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရပါသလဲ?နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားတွေနဲ့ ဖုန်းကဒ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့နိုင်ငံအမည်တွေကို MPTဝက်ဆိုက်ရဲ့ နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုဆိုင်ရာ စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြပေးထား ပါတယ်။http://mpt.com.mm/mm/home-mm/mobile-services-mm/roaming-international-calls-mm/ မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 3. တစ်ယောက်ယောက်စီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်က ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ပြန်မဖြေဘဲ voice mail ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းဖြေကြားစက် (answering machine) နဲ့ဖုန်းလက်ခံထားလိုက်ရင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခ … Continue reading "International Roaming FAQs mm"
Roaming & Promotion FAQs
Roaming & PromotionInternational Roaming Service ဆိုတာဘာလဲ။International Roaming Service ဆိုတာ တခြားနိုင်ငံက မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ ကွန်ယက်တစ်ခုခုမှာ လူကြီးမင်းရဲ့ဖုန်းကို အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။ဒီဝန်ဆောင်မှုဟာ လူကြီးမင်းတို့ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာ ရောက်နေတဲ့အချိန် မြန်မာနိုင်ငံက ဒါမှမဟုတ် တခြားပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာရှိနေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ဖုန်းဆက်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။ ဒီဝန်ဆောင်မှု အတွက် သုံးစွဲသူတွေဆီကနေ ၀န်ဆောင်ခကို MPTက ကောက်ခံသွားမှာပါ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာမိုဘိုင်းဖုန်းကိုသုံးစွဲရာမှာ ဖုန်းအဝင်လက်ခံခြင်းနဲ့အဝင်မက်ဆေ့ချ်တွေအပေါ်မှာ ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံပါသလား။ဖုန်းအဝင်လက်ခံခြင်းအတွက် ၀န်ဆောင်ခကောက်ခံပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်အဝင် လက်ခံခြင်းအတွက်တော့ ၀န်ဆောင်ခ မပေးရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံမှာ မ်ိုဘိုင်းဖုန်းကို အသုံးပြုနေတဲ့အချိန် မက်ဆေ့ချ်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင် တော့ ၀န်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရမှာပါ။ Roaming ကိုဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ။MPT Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက် default မှတဆင့် activate … Continue reading "Roaming & Promotion FAQs"
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ ရက်) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT က ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ကမ္ဘောဒီးယား နှင့် ဟောင်ကောင်သို့ ခရီးသွားလာကြမည့် MPT သုံးစွဲသူခရီးသွားများ သည် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် LTE+ roaming ဒေတာဝန်ဆောင်မှုကို
နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးသွားလာကြမည့် MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အံအားသင့်ဖွယ် ဒေတာနှုန်းထားဖြင့် (Data Roaming) အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃ရက် မှ ၁၄ရက်နေ့) မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ MPT က နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးသွားလာကြမည့် MPTသုံးစွဲသူများအတွက် ရောက်ရှိရာဒေသတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်း (International Data Roaming) ကို အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယခုအစီအစဉ်အသစ်တွင် MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးသွားလာနေစဉ်တစ်လျောက်
International Roaming MM
ပြည်ပခရီးသွားစဉ် MPT မိုဘိုင်းအသုံးပြုခြင်း တခြားနိုင်ငံ ကို ခရီးတွေသွားနေလည်း မိမိရဲ့ မိသားစု ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရလေအောင် MPT နှင့်အတူဆက်သွယ်လိုက်ရအောင်။ How to activate roaming? How to check your roaming status?SMS “RMDON” to 1332Dear MPT Customer, you have subscribed to data roaming. You will be charged according to the country you are visiting. For tariff details, please visit: http://mpt.com.mm/en/home/mobile-services/roaming-international/ Save up to 99% for … Continue reading "International Roaming MM"
Roaming Promotions၁။ ပရိုမိုးရှင်းနှုန်းထားဆိုတာဘာလဲ။ပရိုမိုးရှင်းနှုန်းထားကို အောက်ပါအတိုင်း နိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံများ နှုန်းထား ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊မကာအို၊ ထိုင်ဝမ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ ၊ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ဘရူနိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား 15 Ks/MB ပိုမိုသက်သာေသာ နှုန်းထားြဖင့် Roaming rate cutter9Ks/MB ဖြင့် (၇)ရက်စာ ၉၀၀ ကျပ် ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၊အိန္ဒိယ၊သီရိလင်္ကာ၊သြစတေးလျ၊အမေရိကန် 50 Ks/MB ယူေက၊ဆွီဒင်၊ရုရှား၊ေနာ္ေဝ၊နယ်သာလန်၊အီတလီ၊ ဟန်ေဂရီ၊ဂျာမနီ၊ျပင္သစ္၊ဖင်လန်၊ဒိန်းမတ် 50 Ks/MB (နှုန်းထားများသည် အခွန် ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်) ၂။ ပရိုမိုးရှင်းမပါဝင်တဲ့ ပုံမှန်နှုန်းထားဆိုတာဘာပါလဲ။ပုံမှန်နှုန်းထားကို နိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းမှာ ပိုမိုသက်သာသော နှုန်းထားဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၃။စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသလား။စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်မှုမှာ … Continue reading "Roaming Promotions"
MPT က International Data Roaming အသုံးပြုခများကို 1MB လျှင် ၁၅ကျပ်ဖြင့် အသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့်မိတ်ဆက်
(ရန်ကုန်၊၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလ ၃ ရက်) – မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးကာလအတွင်း နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးသွားလာကြမည့် MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် MPT ဆင်းမ်ကတ်ဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း (International Data Roaming) များအတွက် နှစ်သစ်ကူးအထူးစီအစဉ်အနေဖြင့် အထူးစျေးနှုန်းသို့ လျော့ချပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း MPT က ယနေ့ သတင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယခုအစီအစဉ်အသစ်တွင် MPT အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်
ပြည်ပသို့ ခရီးသွားစဉ် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခြင်း
GSM နှင့် WCDMA ကြိုတင်ငွေဖြည့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ပြည်ပခရီးစဉ်များ ထွက်ခွာသည့် အခါတွင် မိမိလက်ရှိအသုံးပြုသော MPT ဖုန်းဖြင့်ပင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ SMS ပို့ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင် နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြား ရောက်နေစဉ် အသုံးပြုသည့် ကျသင့်ငွေသည် ပြည်တွင်း ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားဖြင့် ကွာခြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Call in Visiting
International Data Roaming ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူလိုပါက ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်သုံး ဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ 1332 သို့ RMDON ဟု စာတိုပေးပို့ပြီး
International Outbound Roaming Services MM
GENERAL » နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများပြည်ပခရီးသွားလ ျှင် လက်ရှိသုံးနေသောဖုန်းကို ယူဆောင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ပြည်ပခရီးထွက်ပါက ယခု မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေသောဖုန်းကို ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။ GSM နှင့် WCDMA ကြိုတင်ငွေဖြည့်သုံးစွဲသူများမှာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊စာတိုပေးပို့ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။ ဝန်ဆောင်မှုအား လေ ျှာက်ထားရန် မလိုအပ်ပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်ရှိစဉ် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုပါက မိမိနိုင်ငံတွင်း ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများနှင့် မတူညီပါ။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခြင်းအတွက် နှုန်းထားတွေ ဘယ်လောက် သတ်မှတ်ထားပါသလဲ။အမ်ပီတီကဒ်တွေကို ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ အသုံးပြုလို့ ရပါသလဲ။နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားတွေနဲ့ ဖုန်းကဒ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့နိုင်ငံအမည်တွေကို အမ်ပီတီဝက်ဆိုက်ရဲ့ နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုဆိုင်ရာ စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြပေးထား ပါတယ်။http://mpt.com.mm/mm/home-mm/mobile-services-mm/roaming-international-calls-mm/ မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရာမှာ (အိမ်) ကြိုးဖုန်းကို ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ။International Call Prefix … Continue reading "International Outbound Roaming Services MM"